WHO oo sheegtay in ay hoos u dhaceen kiisaska la xiriira daacuunka ee Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA WHO oo sheegtay in ay hoos u dhaceen kiisaska la xiriira daacuunka...
WHO oo sheegtay in ay hoos u dhaceen kiisaska la xiriira daacuunka ee Soomaaliya.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO)ayaa sheegay in guud ahaan uu hoos u dhac ku yimid sanadkan tirada kiisaska daacuunka ee cusub ee Soomaaliya marka loo eego tiradii bilowgii cudurka ee dillaacay bishii Diseembar 2017-kii.
Hay’adda caafimaadka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hoos u dhaca kiisaska cudurka ay sababeen wanaajinta iyo hirgelinta waxqabadka ka hortagga oo ay ku jiraan ololaha tallaalka cudurka daacuunka iyo xoojinta howlaha biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda goobaha.
WHO ayaa xaqiijisay inay sii wadi doonto hirgalinta waxqabadka yareyn kara faafitaanka cudurka,iyadoo kaashaneysa hogaaminta iyo taageerada maamulada caafimaadka.
WHO ayaa xustay in tirada guud ee looga shakisan yahay kiisaska daacuunka tan iyo bilowgii sanadkaan inay gaarayaan 5,872,halka tirade dhimashada ay dhan tahay 30,waxaana daadadka hadda socda iyo daacuunka dillaacay ay yimaadeen xilli kiisaska COVID-19 ay ku sii kordhayaan dhammaan gobollada Soomaaliya.
Daacuunku waa cudur caloosha ku dhaca, badanaa wuxuu ku faafaa biyaha iyo cuntada wasakhaysan, wuxuuna sababi karaa shuban daran oo horseedi kara fuuqbax iyo dhimasho degdeg ah.
Previous articleMusharixiinta madaxweyne ku xigeenka Maraykanka oo dood adag ay xalay dhex martay.
Next articleRa’iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Khaliif Galleyr oo geeriyooday.